China Hexadecyl trimethyl ammonium chloride, CAS No. 112-02-7, 1631 fekitori uye vagadziri Kerui Makemikari
CAS Nhamba 112-02-7
Zita rekutengeserana: 1631
Ceteartrimonium Chloride, Quaternary ammonium munyu 1631
Cationic quaternary ammonium munyu 1631
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) ine bactericidal, anti-mildew athari;
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) ine hunyoro hwakanaka uye inoshandiswa zvakanyanya mu shampoo, zvigadzirwa zvekuchengetedza bvudzi, machira ekugadzirisa uye zvimwe zvigadzirwa.
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) inogona kushandiswa seemulsifiers mune pigments, madhayi, asphalt indasitiri nemamwe maindasitiri.
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) inoshandiswa senge emulsifier kurwisa yakanyanya tembiricha mafuta-in-mvura emulsion madhaka uye zvakare inoshandiswa seanopisa-tsvimbo mumiririri mune latex indasitiri kana ichichera matsime akadzika mumafuta emunda indasitiri;
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) ine yakasarudzika chikamu chinja chinogadzirisa chinoshanda uye chinoshandiswa zvakanyanya muyakajeka makemikari indasitiri, mishonga synthesis nemamwe maindasitiri;
50Kg, 175Kg, 200Kg mupurasitiki dhiramu, vatengi 'chinodiwa. Kuchengeterwa kwegore rimwe mukamuri rine mumvuri uye nzvimbo yakaoma.
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) ndiyo yakasvibirira yemakemikari synthesis yepakati, dzivisa kusangana neziso uye ganda, kana uchinge wasangana, uchiyerera nemvura.